Fankalazana ny 8 martsa : Nankahery ny vehivavy rehetra ny vadin’ny Filoha -
AccueilRaharaham-pirenenaFankalazana ny 8 martsa : Nankahery ny vehivavy rehetra ny vadin’ny Filoha
03/03/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Ho fampaherezana ny vehivavy malagasy rehetra dia nisy ny fotoam-pivavahana, notontosaina teny amin’ny Chapel Militaire Ampahibe, omaly, niarahan’ny vadin’ny Filoham-pirenena Rajaonarimampianina Voahangy tamin’ireo vadin’ny mpitandro filaminana rehetra, izay tafiditra sahady ao anatin’ny fankalazana ny andron’ny vehivavy. « Amin’izao fanombohana ny fankalazana ny 8 martsa, izay andron’ny vehivavy manerantany izao dia andraikitro feno no mankahery lalandava anareo, tsy hitsahatra mankasitraka raha teo amin’ny fikirazana ataonareo isan’andro, satria antoka lehibe ho an’ny fampandrosoana ianareo vehivavy, indrindra ianareo vehivavy ao amin’ny fikambanana Fivami, Fivaza ary Fivapo. Zava-dehibe ny fandraisantsika vehivavy andraikitra izay ifaharan’ny fampandrosoana sy fisandratana mirindra eo amin’ny fiainana andavanandro », hoy i Ramatoa Rajaonarimampianina Voahangy, vadin’ny Filoham-pirenena.
Mbola mila ezaka ny fampandraisana andraikitra ny vehivavy eto amin’ny firenena, araka ny fanambaran’ny vadin’ny minisitry ny Fiarovam-pirenena, satria mbola tsy mihoatra ny 20 isan-jato izany ankehitriny, porofon’izany ny salan’isan’ny vehivavy eny anivon’ny parlemanta sy ny mpikambana eny anivon’ny governemanta. Izay anton’ny lohahevitra hankalazana ny andron’ny vehivavy amin’ity taona ity manao hoe, « Fotoana izao : mampisandratra ny fiainan’ny vehivavy ny mpikatroka eny ambanivohitra sy an-tanàn-dehibe. » Mba hanatevenana ny volan’ny fikambanan’ireo vadin’ny mpitandro filaminana moa, dia nitoloran’ny vadin’ny Filoham-pirenena vola mitentina 30 tapitrisa Ariary ny Fivami, Fivaza ary ny Fivapo. Raha tsiahivina, dia noho ny fanitsakitsahana ny zon’ny vehivavy no antony nanokanan’ny firenena mikambana andro iray hankalazana ny andron’ny vehivavy, dia ny datin’ny 8 martsa izany.